Thailand's finance minister: Uhulumeni ngeke zivimbele cryptocurrency zokuhweba - Blockchain Izindaba
wezeziMali Thailand: Uhulumeni ngeke zivimbele cryptocurrency zokuhweba
Uhulumeni Thai ngeke zivimbele cryptocurrency zokuhweba, uthi uNgqongqoshe wezeziMali Apisak Tantivorawong, kodwa zokulawula nohlaka olubhekele okubusa zezimali digital kuzocaciswa ngaphezulu kungakapheli inyanga.
Ngemva kwengxoxo yamuva, ejensi ezihlobene uvumile ukuthi nabalawuli ngeke bakwazi ukunqanda ukusetshenziswa zemali virtual kodwa kuyodingeka ulawule uphinde ulawule kubo ngendlela efanele, Mr Apisak uthe izolo “Thailand Ukusuka 2018” mhlangano isingathwe ngu- Post Namuhla.
Emaphakathi yasebhange, SEC, Ministry Ezezimali kanye nokuLwisana zemali Office (Amlo) bavumile ukusetha i-panel ukusebenza ibuye sihlole izinyathelo ezingaba alawule zezimali digital.
Umthombo eMnyangweni Wezezimali wathi iphaneli ukusebenza maduze walala a zokulawula nohlaka olubhekele ngezinhlamvu digital.
Olawula cryptocurrencies siyingozi nobunzima ngoba akukho ukuvumelana ikhona ezihamba zokulawula, kusho umthombo.
Ngenxa launc ...
US izishaya ukuzwa icala blockchain supply chain
Thumela Previous:ososayensi Russian zenuzi osolwa ngokubulala usebenzisa anamandla ukuze cryptocurrency okwami
Thumela Landelayo:Japanese zimali mfihlo ungase ubhekane 55% intela ku inzuzo